लामो समयसम्म मास्क लगाउँदा आउने समस्या के हुन्? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?
काठमाडौं – मास्कले कोरोना संक्रमण फैलिनबाट जोगाउँछ भन्ने वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि भइसकेको छ। मास्क लगाउनेले आफू र आसपासका अरूलाई पनि संक्रमण फैलन नदिन सहयोग पुर्‍याउँछ।
लामो समय मास्क लगाउँदा आउने समस्या